Shuruudaha Adeegsiga WeAreW11
Shuruudaha iyo Xaaladaha WeAreW11 App
1.1 Qalabkan waxaa ka shaqeeya PingLocker Limited (“PingLocker”), oo ka diiwaan gashan England iyo Wales oo leh Lambarka Shirkadda 08349960 oo cinwaankooda xafiiska diiwaangashan yahay 28 Orchard Road, Lytham St. Annes, Lancashire, FY8 1PF. Qandaraaskaagu wuu inala jiraa, PingLocker, oo Platform-ku wuxuu ku shaqeeyaa isagoo matalaya WeAreW11.
1.2 Waa inaad si taxaddar leh u aqrisaa shuruudahan iyo shuruudaha ("Shuruudda") oo aad aqbasho ka hor intaadan soo dejisan App-ka iyo / ama isticmaalin degelka ama iibsan adeegyada midkood. Adigoo adeegsanaya iyo / ama dalbaya Adeegyada maraakiibta aad ku heshiiseen inaad ku koobnaato shuruudahan. Haddii aadan ku raacsaneyn ama aqbalin mid ka mid ah Shuruudahan, waa inaad joojisaa adeegsiga aaladda isla markiiba ama waa inaad ka gaabsataa gelinta amar kasta.
1.3 Waanu baddali karnaa Shuruudaha waqti ka waqti waana nooc cusub oo lagu dabaqi doono dalab kasta markaad meeleeysid. Fadlan si taxaddar leh u aqri Shuruudahan oo hubi inaad fahamto ka hor intaadan dalban Amarka.
1.4 PingLocker wuu diidi karaa ama wuu joojin karaa inuu bixiyo Adeegga halka PingLocker ay u aragto inay tahay ama loo isticmaali karo jebinta shuruudahan Adeeg, ama wax kasta oo sharci darro ah ama ujeedo aan habooneyn ama sabab kale.
1.5 Haddii aad u baahan tahay inaad nala soo xiriirto wakhti kasta oo ku saabsan Amarka waad sameyn kartaa sidaas oo lagu qeexay sadarka 2.
1.6 Inta lagu gudajiray shuruudahan iyo shuruudahan, ereyada soo socda waxay yeelan doonaan macnayaal soo socda:
"Tag Boorso" - sumadda dharka lagu dhejiyo oo lagu dhejin doono boorsada dharkaaga aan soo saarnay;
“Foom Dalbashada Booqashada” - waxaa loola jeedaa foomka dalbashada booska oo laga heli karo Platform;
"Adeegyada Meheradda" - dhar maydhista, nadaafadda, dib u dejinta iyo adeeg kasta oo kale oo loogu talagalay ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah;
'' Concierge '' - qunsuliyadda goobta ku taal mid ka mid ah Goobaha aan ka shaqeyno;
“Qolka Concierge” - waxaa loola jeedaa mid kasta oo ka mid ah qolalka ilaalada ee caqliga leh ee aaminka ah oo ku yaal mid ka mid ah goobaha loo isticmaalo adeegsiga la xiriira adeegyada.
"Adeegyada Nadiifinta" - Waxaa loola jeedaa mid joogto ah, oo hal mar ah. Imaatinka kahor iyo dhamaadka kireysiga ayaa nadiifinaya cinwaanka aad magacowday;
"Alaabada" - shay kasta oo lagu ridayo Lokerka ama Concierge for PingLocker si ay u fuliyaan Adeegyada Dharka ay ka mid yihiin (laakiin aan ku xaddidnayn) dharka, dharka, kabaha, baakadaha, tuwaallada, gogosha iyo gogosha;
"Adeegyada dharka" - waxaa loola jeedaa nadiifinta qallalan, adeegyada dharka lagu dhaqo, Dharka & laab, Birta, dayactirka & isbadalada laga soo aruuriyay loona diray cinwaanka aad ku magacowday;
"Goob (yada)" - mid ka mid ah PingLocker tafaariiqda dukaamada, dhismayaasha la degan yahay iyo xafiisyada, dhismayaasha guryaha qolka ama qolalka guryaha sida lagu sharxay gudaha Platform;
"Loker" - waxaa loola jeedaa mid kasta oo ka mid ah lookarradayada aaminka ah ee aaminka ah oo ku yaal mid ka mid ah Goobaha loo adeegsado Adeegyada la xiriira Adeegyada;
"Goob suuq" - waxaa loola jeedaa badeecado iyo adeegyo kala duwan oo ay bixiyaan bixiyeyaasha dhinac saddexaad oo isticmaala macaamiisha
"Qorshooyinka xubinnimada" - qorshayaasha xubinnimada sida lagu qeexay bogagga qorshaha xubinnimada ee Platform;
"Amarka" - dalabkaaga Adeegyada sida ku xusan foomka amarrada oo la soo gudbiyo Platform ama App;
"Amarka Xaqiijinta" - farriinta xaqiijinta ee laguugu soo diri doono Platform-ka
"Foomka dalbashada" - foomka dalabka ee ku jira koontadaada PingLocker, foomka amarrada iyadoo la adeegsanayo tilmaamaha qoraalka ama Tag-ka Baarka;
Bixinta Baqshad "-
"Adeegyada Tababarka Shakhsiyeed" - Waxaa loola jeedaa hal ama hal kal-fadhiyo tababaro shaqsiyeed, iyo kalfadhiyo toddobaadle ah oo xero ka-ciyaar
"Platform" - Waxaa loola jeedaa websaydhka (www.wearew11.org) iyo barnaamijkeenna la magac baxay "WeAreW11 App" kaas oo la heli karo si loogu soo dejiyo taleefannada smart iyo aaladda smartka ah iyadoo la raacayo Shuruudaan;
"Adeegyada dib u dejinta" - Waxaa loola jeedaa dib u dejinta alaabada shaqsiyadeed iyo bixinta xirmooyinka guuritaanka,
"Adeegyada" - adeegyada aan adiga kuu fidinay oo ay ka mid yihiin laakiin aan ku xaddidnayn Adeegyada Nadiifinta, Adeegyada Dharka, Bixinta Wadajirka, Adeegyada Tababbarka Shakhsiyeed, Adeegga Saarista, Adeegga Kaydinta, Adeegyada kabaha wada-jirka ah ee ay bixiso PingLocker sida ugu si gaar ah loogu sharaxay bogga ku habboon ee Platform;
"Bixiyeyaasha Adeegga" - dhinac saddexaad oo aan qandaraas la galno si ay nooga caawiso bixinta adeegyada;
"Adeegga kabaha" - adeegga kabaha iyo dayactirka;
"Adeegga Kaydinta" - kaydinta dharka iyo alaabtiisa shaqsiyadeed; iyo
"Shuruudaha" - shuruudahan iyo shuruudahan oo mar la beddeley waqti ka waqti; iyo
1.7 Shuruudahan 'annaga', 'annaga' iyo 'annaga' waxaa loola jeedaa PingLocker, kaabayaashayada, shaqaalaha, wakiillada iyo qandaraasleyaasha madaxa-bannaan. 'Adiga' iyo 'adigu' waxaa loola jeedaa shaqsi kasta oo adeegsanaya Platform-ka iyo / ama sameynta Amarka Adeegyada.
1.8 Markaan u adeegsanno ereyada "qoraal" ama "ku qoran" shuruudahan, tan waxaa ku jiri doona e-mayl iyo ogeysiisyo iyadoo la adeegsanayo Platform.
2. Xiriirka noo dhexeeya adiga iyo annaga
2.1 Waxaad kula xiriiri kartaa kooxda daryeelka macaamiisha taleefanka 02033688454, adigoo warqad noogu soo qoraya PingLocker, 28 Orchard Road, Lytham St. Annes, Lancashire, FY8 1PF, emayl ku soo dir support@pinglocker.com ama Platform.
2.2 Haddii aan u baahanahay inaan kula soo xiriirno waxaan telefoonka ku samayn doonnaa qoraal ahaan, qoraal ahaan xagga emaylka ama cinwaanka boostada ee lagu bixiyo Foomka Codsiga Booska, fariin deg deg ah, ama fariin qoraal ah.
3. Adeegsiga Qalabka
3.1 Waxaad xaqiijineysaa inaad da 'ku filan tahay (ugu yaraan 18 sano jir) inaad si sharci ah u isticmaasho Qalabkan, aad gasho heshiis isla markaana aad u sameysid waajibaadka sharci ee waajibka ah ee waajibaadka saaran eek u imaan kara isticmaalka qalabkan iyo Adeegyadan . Waad fahantay inaad dhaqaale ahaan masuul ka tahay dhamaan adeegsiga Qalabkan iyo Adeegyada adiga iyo kuwa adeegsanaya macluumaadkaaga diiwaangelinta.
3.2 Marka la adeegsanayo Platform-ka, waxaad qiraysaa inaanan mas'uul ka aheyn is-dhexgalka ka dhexeeya isticmaaleyaasha Platform-ka. Waxaad ku raacsan tahay inaadan u adeegsan Platform-ka ujeeddooyin sharci-darro ah, oo aad ixtiraami doontid dhammaan qawaaniinta iyo qawaaniinta lagu dabaqi karo. Waxaad ku raacsan tahay inaadan u isticmaalin aaladda wax kasta oo carqaladeyn kara wax qabadka, musuqmaasuqa waxyaabaha ama haddii kale ay yareyn karto guud ahaan howlaha Platform-ka. Waxa kale oo aad ogolaatay inaadan carqaladeynin nabadgelyada Platform-ka ama isku dayin inaad marin u hesho meelaha aaminka ah ee macluumaadka xasaasiga ah.
4. Dalbashada Amar
Adigoo gudbinaya Foomka Amarka (ha ahaato xubin diiwaangashan ama mid cusub) waxaad u dalbanaysaa Amarka Adeegyada laxiriira. Qiimaha adeeg kasta wuxuu noqon doonaa sida laga soo xigtay bogga ku habboon ee Platform waxaana tan lagu xaqiijin doonaa Foomka Amarkaaga ('Qiimaha'), ama qiime ayaa lagu siin doonaa dib-u-eegista shuruudahaaga.
4.1 Amarkaagu wuxuu ka kooban yahay codsi ku saabsan bixinta adeegyada sida waafaqsan Qiimaha iyo wixii tilmaamo ah ee aad ku soo dartid waqtiga dalabka.
4.2 Xaqiijinta Amarka ayaa xaqiijin doonta sicirka loogu talagalay bixinta adeegyada marka loo eego waxyaabahaas. Fadlan nala soo xiriir waqtigaan haddii qalad ka jiro Amarkaaga. Annagu mas'uul kama noqon doonno khaladaadka Amarkaaga ka dib waqtigan. Soo gudbinta Amarka ma abuurayo heshiis dhexdeena ah. ('Qandaraasyada') ayaa soo baxa marka aan kuu soo dirno emayl xaqiijinaya aqbalaadda Amarkaaga.
4.3 Waxaan u qoondeynaynaa lambar amar oo amar kasta waana ku ogeysiin doonaa markii aan aqbalno Amarka. Fadlan sheeg lambarka dalabka dhammaan waraaqaha xiga ee nala soo xiriira.
4.4 Haddii sabab kasta oo aynaan u fulin kari weyno Amarkaaga, aan kugu ogeysiin doono e-mayl ahaan.
4.5 Marka waxyaabaha qaarkood aysan u dhigmin sharraxaadda ku jira Amarkaaga ha ahaato cabirkooda, dabeecadooda, ama baahi qaas ah. PingLocker waxay xaq u leedahay inay ogolaato qiimeyn gaar ah oo laxiriirta Alaabada noocaas ah iyo xaaladahan oo kale, waan kula soo xiriiri doonnaa si aan ugala hadalno sicirkaas oo kale.
4.6 Fadlan la soco in iyada oo la xiriirta amar kasta oo aan lahayn koodhka foojarka oo qiimahoodu ka yar yahay £ 15, aan xaq u leenahay inaan ku soo dallacno ugu yaraan £ 15 ugu yaraan.
5.1 Waa inaad hubisaa inaad raacdo tilmaamaha oo dhan si faahfaahsan oo dhan Platform, Order Foomka ama calaamadaha tilmaamaha ee Goobaha Loker ama Concierge Goobaha ('Tilmaamaha'). Ka gaabinta inaad u hogaansan awaamiirtan waxay sababi kartaa in Amarkaaga na diido.
5.2 Meelaha alaabada la dhigo Kabadheenayada, waa masuuliyadaada inaad xasuusato Lokerka aad gelisay Waxyaabahaaga iyo lambarka 4-nambar ee aad ku xirtay Lokerka.
5.3 Ma u adeegsan doontid Adeegyada wax kasta oo qaldan, akhlaaq darro ah, sharci darro ah ama ujeedo kale oo aan ahayn kuwa aad noogu sheegto Foomka Amarka.
6.1 Adeeg bixinta, PingLocker waa inuu:
6.1.1. in aad kaala shaqeyso dhammaan arrimaha la xiriira Adeegyada, oo aad u hoggaansanaato dhammaan tilmaamaha macquulka ah ee la bixiyo;
6.1.2. ku qabtaan Adeegyada sida ugu wanaagsan daryeelka, xirfadda iyo dadaalka iyada oo la raacayo ku dhaqanka ugu wanaagsan ee warshadaha la xiriira, xirfadda ama ganacsiga iyo
6.1.3. Hubso in Adeegyadu ku xaqiijin doonaan tilmaanta iyo tafaasiisha lagu qoray Platform.
7. Qiimaha & Bixinta
7.1 Qiimaha adeeg kasta wuxuu noqon doonaa sida lagu soo xigtay Qormadeena oo qiimayaasha waxaa ku jira VAT (meeshii ay ku habboon tahay).
7.2 Waxaa lagaa rabaa inaad diiwaangeliso faahfaahintaada bixinta kahor intaanad dalban Amarka. Bixinta adeegyada oo dhan waa inay noqotaa kaarka amaahda ama deynta oo adoo oggolaanaya shuruudahan waxaad u oggolaaneysaa inaad isticmaasho lacagahaas, markasta oo soo bax. Halkii si gaar ah loogu heshiiyey, bixinta waxaa sidoo kale lagu sameyn karaa wareejinta bangiga ama PayPal.
7.3 PingLocker waxay sameysaa dadaal macquul ah si loo hubiyo in dhammaan kaararka amaahda iyo kaarka deynta ee lagu fuliyo Adeegyada ay aamin yihiin. Si kastaba ha noqotee, haddii eedeymaha aan la fasaxin ay ka muuqdaan kaararkaaga deynta ama caddeynta kaarka deynta ee kaar kasta oo loo adeegsado Qalabkan waqti kasta inta lagu jiro ama ka dib markaad sameyso Amarkaaga, sameyso macaamil ganacsi ama shaaca ka qaadid faahfaahinta kaarkaaga Platform-ka, PingLocker mas'uul kama noqon doono ama mas'uul ka ah dariiq kasta oo laxiriira wixii waxyeelo ah ama lumiso wixii dabeecad ah ee kugu soo gaadhay ee ka dhacey ama si kasta oo ku xiran adeegsiga la sheegay, macaamil ganacsi ama muujinta, keydso halka eedeymahaas aan la fasaxin ay u muuqdaan inay yihiin natiijada tooska ah ee dayacaada PingLocker oo ay ku qasban tahay sharci kasta oo uu leeyahay. Xuquuqda aad lahaan karto.
7.4 Qiimaha waa la beddeli karaa waqti kasta, laakiin isbeddelada saameyn kuma yeelan doonaan amarradii aan horay kuugu soo dirnay Xaqiijinta Amarka, ilaa adeegga aad amartay uusan ku filneyn. Haddii taasi dhacdo, waa lagaa codsan doonaa, haddii aad diido soo jeedinta sicirka dalabkaaga waa la burin doonaa oo adeegyada ayaan fulin.
7.5 Waqtiba waqti ka dib Adeegyada qaar ayaa laga yaabaa inay diyaar ahaadaan halka qiimaha uu ku yaal '' Quote '' taasoo macnaheedu yahay inaad awoodi kartid inaad ku meeleeysid amar halkaas oo markaas qiimaha lagu siin doono oggolaanshahaaga ama diidmadaada. Haddii aad diido soo-jeedinta sicirka dalabkaaga waa la burin doonaa oo adeegyada ayaan la fulin.
8. Qiimaynta Adeegsiga Cusub
8.1 Markii aad iska diiwaangelinayso xubin ka ah adeegyada PingLocker iyadoo la adeegsanayo Platform, waxaad xaqq u leedahay, waxaad xaq u yeelan kartaa sicir-dhimista dalabka koowaad, oo ah xaddi lacageed ama boqolkiiba ah, oo leh ama aan xad lahayn, oo lagu caddeeyay Platform-ka ama iimaylka inaad adiga naga timaaddo isla markaana la soo bandhigo xilliga la amro. Fadlan ogsoonow in qalabka waqtigiisu dhacay uusan muujin karin sicir-dhimista ugu dambeysay, kiiskan marka sicir-dhimista lagu muujiyey barta dalabka ayaa la isticmaali doonaa.
9. Foojarrada iyo Xayeysiinta
9.1 Foojarradu waxay ku xiran yihiin taariikhda dhicitaanka iyo qiimaha qiimeynta gaarka ah.
9.2 Shuruudaan ayaa quseeya dhammaan foojarka waxayna ku xiran yihiin shuruudaha adeegsiga.
9.3 Foojarrada looma adeegsan karo iyadoo lala kaashanayo waraaqo kale ama dalab kale.
9.4 Kaliya hal foojarka ama koodhka ayaa la adeegsan karaa halkii xawilaad.
9.5 Foojarrada ayaa ah kuwo aan la wareejin karin, isla markaana aan lahayn qiimo lacageed. Dhigashada xaashida iibinta foojar iibku aad ayuu mabnuuc u yahay isla markaana wuxuu ka dhigayaa lacagtii foojarka.
9.6 PingLocker wuxuu xaq u leeyahay inuu diido foojarka sabab macquul ah darteed.
9.7 PingLocker waxay xaq u leeyihiin inay ka laabtaan dalabkooda waqti kasta iyo digniin la'aan.
9.8 Si aad u iibsato foojarka, waa inaad soo bandhigtaa koodhka laga helo foojarka markay goobjoogta tahay.
9.9 Qiimaha ugu yar ee amarrada la adeegsanayo nambar waraaqaha lagu bixiyo waa $ 20 ama haddii kale la cayimay, oo ay ku jiraan foojarka.
9.10 Marka la hawl geliyo, foojarada waa in lagu adeegsadaa 24 saacadood gudahood.
9.11 Foojarrada ayaa la soo saaraa oo lagu xaddidaa midkiiba halkii qoysba.
9.12 foojarada laga yaabee inay ku xadidan tahay adeegyadda iyo goobaha la xushay.
10.1 PingLocker ma ballanqaado in macluumaadka ku jira Platform-ka inay khaldan yihiin ama Platformku noqon doono virus ama cayayaanka aan lahayn.
10.2 Qalabka wuxuu ka kooban yahay tiro badan oo Adeegyo ah marwalbana waa suuragal in, in kasta oo dadaalkeenna ugu wanaagsan, qaar ka mid ah Adeegyada la taxay laga yaabo in si khaldan loo sharxay ama lagu qiimeeyay. Waxaan sida caadiga ah hagaajin doonaa khaladaadkaas si kastaba ha ahaatee; waajib kuma lihin inaanu ku siino adeegyadi sida lagu sifeeyay Platform-ga waqtiga qaladka.
11. Walxaha lumay ama Waxyeelay
11.1 Haddii ay dhacdo in adeeg kasta oo la bixiyo aad rumeysan tahay in ay jiraan waxyaabo lumo ama wax gaareen, tani waa in nalagu soo wargeliyaa 48 saacadood gudahood ka dib dhacdada dhacday. Waxaan u isticmaali doonnaa dadaalkeenna macquul ah si aan u soo ceshano Alaabadaada waxaanna dib u eegi doonnaa sheegashooyinka hantida ee luntay kiis ahaan iyadoo loo eegayo kiis ahaan.
11.2 Magdhow kasta oo ku saabsan lumista ama waxyeelada Alaabada, waxay noqon doontaa oggolaansho la'aan.
11.3 Mas'uuliyadayada sida kasta oo ay u dhacdo iyo iyada oo aan loo eegin in sababta wax xatooyo ah, khasaare ama waxyeello loo sharraxay ama aan la sharraxaynin kama badnaan doonto qiimaha beddelka wixii alaab ah ee la xado, lumay ama waxyeelloobo. Uma lihi doonno xaalad kasta oo aan ku qasbanaan karno si toos ah ama khasaare sababi kara sida (laakiin aan ku xaddidnayn) luminta faa'iidooyinka, luminta suuqa ama cawaaqibka ama dib-u-dhaca ama weecinta si kastaba ha noqotee.
11.4 PingLocker wuxuu adeegsan doonaa dadaallo macquul ah si uu ugu laabto ama u dayactiro Waxyaabahaas oo ay dib u eegi doonaan sheegashooyinka kiis kasta iyadoo loo eegayo kiis ahaan.
12. Bixinta Adeegyada iyo Waqtiga Isbeddelka
12.1 PingLocker ayaan dammaanad qaad ka qaadin waqtiga loo jeedinayo. Waxaan u isticmaali doonnaa dadaalkeenna macquulka ah si aan u siino Adeegga waqtiyada wareegga oo si faahfaahsan looga hadlayo Platform-ka, si kastaba ha noqotee duruufaha ka sarreeya xakamayntayadu waxay mararka qaarkood sababi karaan dib u dhac ku yimaada Adeegyada. Waxaan isku dayeynaa inaan kula socodsiinno horumarka Amarkaaga.
13. Lacag celin & Tirtirid
13.1 Halka aynaan awoodin inaanu ku siino Adeegga sabab kasta ha noqotee, waxaan ku siin doonnaa lacag celin 30 maalmood gudahood markii amarkaaga la soo gaabiyo, anagoo xisaabinayna kaarka aad ku bixisay.
13.2 Waxaan qiraynaa in qandaraas lagu galay fogaan isla markaana waafaqsan qawaaniinta heshiisyada macaamiisha 2013 waxaad xaq u leedahay inaad baabiiso heshiiskan 14 maalmood kadib maalinta heshiiska la galay.
13.3 Marka loo eego qodobka 3.1, waxaad ogolaatay in Adeegyada loo malaynayo in ay ka bilaaban doonaan taariikhda iyo waqtiga Amarka Xaqiijinta iyo iyada oo la raacayo qawaaniinta Heshiisyada Macaamilka 2013 iyo iyadoo la raacayo qawaaniinta iibinta masaafada aad u leedahay xaq kuma lihid inaad tirtirid. Adeegyada.
14. Masuuliyad iyo xaddidid
14.1 Waxaan ku qaban doonnaa Adeegyada si heer macquul ah oo daryeel ah, dadaal, xirfad iyo xukun ah iyo in Adeegyada la fidiyo uu noqon doono mid tayo leh oo qancin kara oo macquul ah oo ku habboon ujeeddada adeegyada ay khusayso sida caadiga ah loo bixiyo.
14.2 Alaabada la dhigo Sanduuqa ayaa ku jira halistaada waana inaad sii lahaan doontaa lahaanshaha iyo halista waxyaabaha noocan oo kale ah waqti walbana. PingLocker ma aqbaleyso wax mas'uuliyad ah wixii khasaaro ah ee aad soo gaarto iyadoo ay ugu wacan tahay waxyeelo soo gaarto ama aad u weyso waxyaabaha lagu ridayo sanduuqa iyadoo ay sabab u tahay jebinta heshiis kasta oo annaga noo ah.
14.3 Marka laga reebo qaddarinta dhimashada ama dhaawaca shaqsiyeed ee ay sababtay dayacaadda PingLocker, PingLocker mas'uul kama noqon doono sabab kasta oo wakiil ah (haddii aan khiyaamo aheyn), ama xilli kasta ama mas'uuliyad kasta oo lumisa keydinta la filayo, dakhliga ganacsiga, ama macaashka, ama wixii si aan toos ahayn, khaas ah ama wixii ka dhalan kara, luminta wanaagga, xogta iyo dhammaan wixii kale ee khasaare ah (ha ahaato ama ha ka soo kacin dariiqii caadiga ahaa ee ganacsiga), ama khasaare kale oo dhaqaale ama sheegashooyin kale si kastaba ha noqotee ee hoos yimaad heshiiskan ama bixinta Adeegyada.
15. Haddii ay dhibaato ka jirto adeegyada
15.1 Haddii ay jiraan wax dhibaato ah oo ku saabsan Adeegyada:
15.1.1 fadlan la xiriir kooxda daryeelka macaamiisha e-maylka ah ee ah support@pinglocker.com si faahfaahsan oo ku saabsan Platform oo noo sheeg sida ugu dhaqsaha badan ee macquulsan;
15.1.2 Khasab kuguma noqon doontid inaad wax ka qabatid cabashadaada.
15.2 Cabashooyinka waa in nala ogeysiiyaa muddo 24 saac gudahooda ah markaan helno Alaabadaada haddii aad aamminsan tahay inaan ku xadgudbeynay waajibaadka saaran sida ku xusan Shuruudaan.
15.3 Macaamiil ahaan, waxaad leedahay xuquuqo qaanuun oo sharciga ah haddii Adeegyadeena aan lagu fulinin xirfad macquul ah iyo daryeel, ama haddii waxyaabaha loo isticmaalay yihiin qalad ama aan loo qeexin. La-talin ku saabsan xuquuqdaada sharci ayaa laga heli karaa Xafiiska La-Talinta Muwaadiniinta ee deegaankaaga ama xafiiska Heerarka Tartanka. Shuruuddaan kuma jiraan wax saameyn ah ku yeelan doona xuquuqahaan sharciyeed.
16. Xoog Majeer
16.1 PingLocker mas'uul kama noqon doono wixii taban (ama loo arko inuu ku xadgudbay heshiiskan) sabab kasta oo dib u dhac ah oo sabab u ah duruufo ka baxsan awooddeena caqliga leh.
17.1 PingLocker wuxuu adeegsan karaa faahfaahinta aad na siiso si aan u bixinno Adeegyada, socodsiinta lacagtaada adeegyadaas iyo bixinta macluumaadka ku saabsan Adeegyadeena. Waxaan mar walba hubin doonnaa u hoggaansanaanta dhammaan sharciyada dhowrista macluumaadka ee Boqortooyada Midowday iyo shuruucda meel yaal ilaa waqti ilaa waqti. Macluumaadkaaga kamala shaqeyn doonno qolo saddexaad annagoo aan kuu sheegin adiga / oggolaanshahaaga. Nidaamkan waxaa ka shaqeeya wehelkeena tikniyoolajiyadda ah ee Blackbell Inc, Shirkadda Adeegga Shirkadda, 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808, Mareykanka waxaanan ku shaqeyn doonnaa websaydhka oo aan u adeegsan doonnaa xogtaada si waafaqsan Nidaamkayaga Asturnaanta oo la heli karo si loo daawado iyada oo loo marayo barta internetka ama halkaan riix .
18. Xuquuqda hantida aqooneed iyo iskuxirka websaydhka
18.1 Dhammaan waxyaabaha ku jira Platform, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn, qoraalka, sawirada, calaamadaha, astaamaha, sawirrada, codadka, fiidiyaha fiidiyaha, qaabeynta bogga, koodh hoosaadka iyo barnaamijku waa hantida PingLocker ama la-hawlgalayaashayada. Waxaad qiraysaa in waxyaabaha noocaas oo kale ah ay ilaalinayaan sharciyada lagu dabaqi karo oo aad aqbali weydeen inaadan isticmaalin ama koobi ka helin qayb kasta oo ka mid ah ogolaanshahayaga la'aan. Waxba shuruudahan laguma dhisi doono inay noqdaan wareejinta ama deeq (iyada oo la raacayo ama haddii kale) adiga laysankaaga ama wax xuquuq ah ama gudaha nuxurka ka kooban.
18.2 Platform-ku wuxuu ka koobnaan karaa xiriiriyeyaal websaydhada ay maamulaan dhinacyada aan ka aheyn PingLocker. Xiriirka noocan oo kale ah waxaa loo bixiyaa tixraacaaga oo keliya. PingLocker ma maamusho shabakadaha noocaas ah mas'uul kama ahan waxa ku jira. Ku darista isku-xirnaanta isku-xidhka boggan shabakadaha kale ee noocan ah ma muujineyso wax oggolaansho ah oo maaddada ku saabsan websaydhyadaas ama xiriir kasta oo lala yeesho hawl wadeenadooda.
18.3 Platform-ka ayaa loo diyaariyey isticmaal ahaan shaqsiyeed. Ma koobi karaysid, ma la socon kartid, kala-shaandheynta, caaro, xiriir-qoto dheer ama uma soo saari kartid wax kasta, macluumaad ama barnaamij kumbuyuutar oo lagu soo daabacay bartan bartilmaameed ganacsi ama tartan tartan kasta.
19. Arimaha Guud
19.1 PingLocker waxay xaq u leedahay inay ku bedesho shuruudahan waqti ka waqti waqti ayagoon ku ogeysiin. Markaad sii waddo adeegsiga iyo marin u helidda Platform-ka waxaad oggolaatay inuu xaddido wixii isbeddel ah ee la sameeyo. Waa masuuliyadaada inaad hubiso Shuruudahan waqti ilaa waqti si aad u xaqiijiso kala duwanaanshaha noocan ah.
19.2 PingLocker wuxuu shaqaaleysiin karaa qandaraasleyda-hoosaad si ay u fuliyaan qayb kasta oo ka mid ah Adeegyada.
19.3 Waxaa la ogsoon yahay in PingLocker uusan mas'uul ka noqon doonin jebinta heshiiska ama wax kasta oo kale oo dhaca ama cilad ku timaadda wax qabad aan ka ahayn shaqaalaha PingLocker ama ay sameeyeen adiga ama wakiilladaada, shaqaalaha ama dadka kale ee xiriirka kula leh.
19.4 Haddii eray kasta ama qodob ka mid ah Shuruudahan loo haystay inuu yahay mid aan ansax ahayn, sharci darro ah ama aan lagala tashan karin sabab kastoo maxkamad awood u leh, qodobkaas waa la gooyaayaa inta soo hartayna waxay ku sii jiri doonaan si buuxda oo fulin ah.
19.5 Shuruudahan (oo ay weheliso sharaxaadda iyo faahfaahinta faahfaahinta Platform) waxay ka kooban yihiin heshiiska dhammaan dhinacyada.
19.6 Dib u dhac, fal ama ushaafida adiga ama PingLocker adiga oo isticmaalaya wixii xuquuq ama xalin ah looma arko in laga dhaafayo taas, ama wixii xuquuq ah ama dawayn ah.
19.7 Qandaraaska lagu sameeyay adiga iyo PingLocker ee ku saabsan aqbalaadda Amarka ma dhaqan gelin karo dhinac saddexaad marka la eego Heshiisyada (Xuquuqda Dhinacyada Seddexaad) Sharciga 1999 ama haddii kale.
19.8 Shuruudahan iyo qandaraaskeena waxaa xukumaya sharciga England iyo Wales. Khilaafaadka waxaa loo gudbin doonaa xukunka gaarka ah ee maxkamadaha England iyo Wales.
Xiriirinta shuruudaha gaarka ah ee adeegyada:
Shuruudaha u gaarka ah Adeegyada Dharka
Shuruudaha u gaarka ah Adeegga Kabaha
Shuruudaha u gaarka ah howlaha Nadiifinta & Guriynta
Shuruudaha u gaarka ah adeegyada tababarka shaqsiyeed
Shuruudaha u gaarka ah Adeegyada Kaydinta
Shuruudaha u gaarka ah Adeegyada Dib u dejinta
Shuruudaha u gaarka ah Adeegyada wareejinta Gegada Diyaaradaha
Shuruudaha u gaarka ah Qorshayaasha Xubnaha
Shuruudaha u gaarka ah Suuqa Suuqa iyo Dukaanka Internetka